VAOVAON'NY COLLECTIF GTT - rov@higa
21 Juin 2011, 10:15am
VAOVAON'NY COLLECTIF GTT TAMIN'NY (20/06/11)
Saratsarahin’i TGV ny Foloalindahy
Tena tompon’ny zarazarao anjakany mihitsy ny FATE raha ny asa ratsiny nandritran’ny roa taona mahery izao. Ny Tafika Malagasy no efa nisintomany vitsivitsy nananganany ny milisy hatramin’ny taona 2009. Roa taona mahery aty aoriana dia mbola misy mizana mitongilana ihany eo amin’ny samy “be bôty”. Na dia ny mpomba azy aza dia tsy vitany ny mampitovy tantana azy.
Zara tsy mitovy
Araky ny vaovao marim-pototra dia vola mitentina 800 tapitrisa Ariary (4 milliards FMG) avy any amin'ny orinasa Océan Trade no nozaraina tamin’ireo manamboninahitra nanao ilay fanambarana manohitra ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA Marc an-tanindrazana. Rehefa natao anefa ny fizarana ny “remby” dia ny Jly Ndriarijaona André (Cemgam FATE) sy ny Jly Zafera (kaomandin’ny FIGN) no fantatra fa tena nanao be fandraoka satria naka 200 tapitrisa Ariary (1 milliards FMG) isanisany avy. Ny ambiny rehetra kosa dia nifampizara ny sisa tsy lanin’izy ireo. Mbola misy olana koa anefa ny an’ireto “be galona” ambiny ireto satria misy ny nahazo matevina ary misy ny zara raha nitsimpona. Miteraka lonilony eo amin’ny manamboninahitra samy manompo ny FATE io tantara io hatramin’izao ka asa izay hiafarany.
Maro ny siosion-dresaka momba ny fikomiana mety hitarika “fanonganam-panjakana” ato ho ato. Efa nolazain’ny mpitari-tolona iray teo amin’ny Magro Behoririka fa mikasa hanatanteraka izany ny Cemgam an’ny FATE miaraka amin’ny manamboninahitra sasantsasany ka mivorivory mangingina any ambadika any. Fa voamarina ihany koa fa misy manamboninahitra ambony ministry ny FATE teo aloha no manangona “éléments élites” ao amin’ny Tafika amin’izao fotoana izao. Niketrika ny haka an-keriny andrim-panjakana izy ireo tamin’ny herinandro lasa teo saingy tsy mbola misy tohiny izany hatramin’izao.
Mbola tsy fay …
Mazava izany fa dia marary tanteraka ny Foloalindahy noho ny fitondrana miorina amin’ny vola ataon’ny FATE. Io vola io hatrany no efa mandratra ireo andiany miara-mihira sasany ao amin’ny “tandroka aron’ny vozona”. Simbain’I TGV amin’ny tambitamby vonjy tavanandro lalandava ny maha-izy azy ny miaramila Malagasy. Volana vitsy izao dia nomena fanamiana vaovao ireo miaramila ary nampanantenaina fa maimaimpoana izany fitaovana izany. Akory anefa ny hagagan’ireo miaramila tsotra ambany grady fa banga 20000 Ariary ny karamany nividianana izany fanamiana izany. Androany indray dia fiara tsy mataho-dalana P4 efa nampiasain’ny tafika frantsay mihisa 25 no natolotry ny mpanongam-panjakana ny Tafika sy ny Zandarimariam-pirenena. Nambaran’I TGV fa novidian’ny FATE tamin’ny Frantsay ireto fiara ireto. Inoana anefa fa tambitamby avy amin’ny mpanjanaka izy ireny mba hanamafisana ny hatoka tsy hampilamina ny tany. Voalaza fa mbola hiampy fiara vaventy maromaro ireto fanomezana ireo.